Senator Ayuub oo kulamo wadatashi ah la qaadanaya dhalinyarada gobalka Awdal ee Soomaaliland – Kalfadhi
Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo katirsan Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya islamarkaana laga soo doorto gobalka Awdal oo katirsan degaanada maamulka Soomaaliland ayaa lagu wadaa in uu kulan Caawa la qaato qaar kamid ah dhalinyarada gobalkaasi.
Dhalinyaradaan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulanka ay la qaadanayaan Senator Ayuub waxa uu dhici doonaa 30-ka bisha May ooo Caawa ku beegan waxaana Senator-ku sheegay in ay isaga iyo dhalinyarada ay kawada hadli doonaan xaaladda Soomaaliya.
“Waa kulan wadatashi ah oo aan uga arinsan doono xaaladda Soomaaliya iyo is arag guud, waayo waa dadka aan ku matalo Soomaaliya waana in aan is xogwareysanaa” ayuu yiri Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo la hadlay Kalfadhi.
Senator Ayuub ayaa sheegay in dhalinyarada gobalka Awdal iyo isaga ay aad isaga warhayaan islamarkaana ay jireen kulamo kale ooh ore u dhacay kanna uu kamid yahay kulamadii hore.
“Gobalka Awdal waxaa ka jirta nabad balse waxaa loo baahanyahay sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalinyarada, sidee la isugu keeni karaa Soomaaliya iyo Soomaaliland? Waa maxay doorka dhalinyarada” ayuu yiri Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf.
Senatorro iyo Xildhibaano badan oo katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa hore kulamo nuucaan oo kale ah la yeeshay dhalinyarada ka soo jeeda degaanada laga soo doortay.
Senator Ayuub Ismaaciil ayaa noqonaya Senet-kii ugu horreeyay ee gobalada Waqooyi oo kulan wadatashi ah la yeesha dhalinyarada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho.